စက်တင်ဘာထာဝရ: အိုစမာဘင် လာဒင် ပါကစ္စတန် တွင် သေဆုံးကြောင်း အမေရိကန် အစိုးရ အတည်ပြု
အိုစမာဘင် လာဒင် ပါကစ္စတန် တွင် သေဆုံးကြောင်း အမေရိကန် အစိုးရ အတည်ပြု
သီရိထက် ၀ါရှင်တန် ဒီစီမှ သတင်းပေးပို့ သည်
၂၀၀၁ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် နယူးယောက်ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးမျှော်စင် ညီနောင်နှင့်အခြား တိုက်ခိုက်မှုများကို စီစဉ်ခဲ့သည့် ယခင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ အခြေစိုက်အယ်(လ)ကာယီးဒါး အကြမ်းဖက် အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်င်ဖွား ချမ်းသာသော သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်သူ အိုစမာဘင် လာဒင်သည် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ၏ မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူ၏ရုပ်အလောင်းကို အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များက ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း တနင်္ဂနွေနေ့ညတွင်သမ္မတအိုဘားမားက တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ Freedom News Group မှသတင်း ရရှိသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တိုက်ခိုက်မှု မတိုင်ခင်ကတည်းက FBI အဖွဲ့ ၏ အလိုရှိဆုံးသူဆယ်ဦးတွင်ပါဝင်သည့် အိုစမာဘင်လာဒင်သည် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ များ၏ မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအတွင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဉ် တနင်္ဂနွေနေ့က ဦးခေါင်းကိုသေနတ်မှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့ကာအမေရိကန် တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးပြီးနောက် ယနေ့အတည်ပြု ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမေရိကန်တွင် လူပေါင်း ၃၀၀၀ကျော် သေဆုံး ခဲ့သည်။အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘာမားက အိုစမာဘင်လာဒင် သေဆုံးကြောင်း ယနေ့အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ရာ အမေရိကန်ပြည်သူများက အိမ်ဖြူတော်တွင် လာရောက်စုရုံးပြီး အောင်ပွဲခံကြသည်။
အိုစမာဘင်လာဒင်သည် သေဆုံးချိန်တွင် အသက် ၅၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဘင်လာဒင်သည် အစ္စလာမာဘတ်မြို့၏ မြောက်ဘက် ၅၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၄၀) အကွာရှိအဘော်ဒါဘတ်မြို့တွင် အမေရိကန်ရေတပ်အထူးတပ်ဖွဲ့က ၎င်းပုန်းအောင်နေသည့် နေရာကိုဝင်ရောက် ရှင်းလင်း စဉ်အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့များ၏ လက်ချက်ဖြင့် အသေဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါ တိုက်ပွဲတွင် သူ၏သားနှင့် အခြားထိပ်တန်းခေါင်း ဆောင် နှစ်ဦးကိုပါ အသေဖမ်းမိခဲ့သည်။
အိုစမာဘင်လာဒင် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ
အမေရိကန်အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာဉ် အကြမ်းဖက်မှု့များကို ကျုးလွန်ပြီး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များကို ငွေကြေး စိုက်ထုတ်ပေးခဲ့သည် အိုစမာဘင်လာဒင်သည် ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင်ယီမင်နိုင်ငံမှပြောင်းရွှေ့ အခြေစိုက်ပြီး ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံတွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာသည့် မိုဟာမက် ဘင်လာဒင် ၏သားသမီး ၅၂ ယောက်မှ ၁၇ ယောက်မြောက် သားဖြစ်သည်။
၎င်း၏ဖခင်သည် မက္ကာနှင့်မဒီနာမြို့ များမှ အစ္စလာမ်မစ်ဗလီများကို ပြန်လည်မွမ်းမံပြုပြင်ရာမှ ချမ်းသာ လာခဲ့ပြီး သားသမီးများကို ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံမှ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြား စေခဲ့သည်။
ဘင်လာဒငသည် တက္ကသိုလ်တွင် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး ပါမောက္ခအစ္စလာမ်ဝါဒ သုတေသီအဗ္ဗဒူလ်လာအာဇမ် နှင့် တွေ့ဆုံပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထိုပါမောက္ခ တည်ထောင်ထားသည့် မူဂျာဟေဒင်အဖွဲ့ များကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ ပြုခဲ့သည်။
အာဇမ်၏မူဂျာဟေဒင် အဖွဲ့များသည် နောက်ပိုင်းတွင် ဆိုဗီယက်ကျူးကျော်မှုကို တွန်းလှန်နေသည့် အာဖဂန် နစ္စတန် တပ်ဖွဲ့များဘက်မှာ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ ဘင်လာဒင်လည်း ထိုအဖွဲ့တွင် လိုက်ပါသွားခဲ့ပြီး အာဖဂန် စစ်မြေပြင်ကိုရောက် ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဘင်လာဒင်၏ အသက်သည် ၂၂ နှစ် သာရှိသေးသည်။
﻿THE PRESIDENT: Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al Qaeda, andaterrorist who’s responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 7:58 AM